Anya na-acha edo edo nke agụ iyi, ihe ịga nke ọma nchịkọta akụkọ 2006 | Akwụkwọ ndị dị ugbu a
Anya odo nke agụ iyi
Anya odo nke agụ iyi (2006) bu akwukwo kacha ere site n'aka onye edemede France, onye nta akụkọ na onye nkụzi Katherine Pancol. N'aka nke ya, akwukwo a bu uzo mbu nke ihe omuma nke odi n'iru Waltz ji nwayọ nke mbe (2008) na Ndị Park Central Park na-enwe mwute na Mọnde (2010).
Ke adianade do, ezigbo nchịkọta akụkọ nke Les Yeux Jaunes des Agụ iyi —Aha mbụ na French— emeela ka Pancol mara mba niile. N'ezie, aha a natara, tinyere ndị ọzọ, onyinye Maison de la Presse. N'otu aka ahụ, e wetara akụkọ ya na nnukwu ihuenyo na 2014 n'okpuru nduzi nke Cécile Talerman; nke Emmanuelle Béart na Julie Depardieu dere.
1 Nchịkọta nke Anya Anya nke Crocodiles, nke Katherine Pancol dere
1.1 Mbido mbu
1.2 Ihe odide nke abụọ
1.3 Oge ntinye
2.1 Ihe omumu
2.2 Ihe nnọchianya
2.3 Echiche nke ọrụ
2.3.2 A protagonist dabere na ezigbo agwa
2.4 Ọmụmụ nke trilogy
3 Banyere onye edemede, Katherine Pancol
3.1 Ndụ dum jikọtara na akwụkwọ ozi na akwụkwọ akụkọ
3.2 Akwụkwọ Katherine Pancol
Na nchikota nke Anya odo nke agụ iyinke Katherine Pancol dere
Josephine bụ nwanyị dị afọ 40 nke bi na Paris ya na di ya Antoine na ụmụ ha nwanyị abụọ, Hortense na Zoe. Na mbụ, N’agbanyeghi na alụmdi na nwunye ya dara ada, ọ nweghị ike ime mkpebi doro anya n’ihi enweghị ntụkwasị obi ya. N'ọnọdụ ọ bụla, nkewa ahụ bụ ihe a na-apụghị izere ezere, n'ihi na di ya na-ele anya dị ka onye nwere obi ebere mgbe a chụpụrụ ya n'ụlọ agha ebe ọ na-arụ ọrụ.
Maka inri ọzọ, Antoine anọọla n’ọnọdụ a otu afọ, kama ịka jijiji, ọ malitere ikwesị ntụkwasị obi nye nwunye ya. Mgbe ahụ mkparịta ụka ikpeazụ na nkewa ezi uche dị na ya abịa. Site n'oge ahụ gaa n'ihu, emere ka usoro nke ihe dị ntakịrị na njikọta pụtara. Otu n'ime ha bụ ọrụ Antoine na-arụ n'Africa dị ka onye njikwa nke agụ iyi.
Ihe odide nke abụọ
Ihe omume ndị ọzọ dị egwu gụnyere ihe odide nke abụọ. Nke mbu: Enigmatic Shirley, onye agbata obi pụrụ iche; na nke abụọ: Ezigbo nne Josephine bụ Henriette. Onye nke abụọ lụrụ onye na-akwado Marcel Gorsz na nuptials nke abụọ, nke mere ka o nwee ndụ mara mma ọ chọrọ mgbe niile.
Usoro nke ihe omume ga - agbanwe mgbe Iris, Nwanne nwanyị Josephine mara mma, Ọ na-azọrọ na ya dere akwụkwọ akụkọ, ọ bụ ezie na ọ bụ ụgha. Ihe ọzọ bụ na ọ họọrọ idobe aghụghọ ahụ ruo ọgwụgwụ, ruo n'ókè nke na ọ gwara nwanne ya nwanyị ka o dee ederede ahụ. Agbanyeghị na Josephine enweghị mmasị n'echiche ahụ, n'ikpeazụ ọ kwenyere ịkọwapụta ihe ederede ka ọ nweta ọtụtụ ego (na ịkwụ ụgwọ ụgwọ ya).
Ndị mmadụ amaghị ọnwa ole na ole ka e mesịrị, akwụkwọ ahụ pụtara bipụtara, nke ọdịnaya ya dabere na nnukwu ihe omuma ihe omuma nke Josephine dere n'ihe dị ka narị afọ nke XNUMX. Mwepụta ahụ ghọrọ ihe ịga nke ọma n'akwụkwọ akụkọ; Iris ọkọkpọhi niile ama; Josephine, ego a na-enweta. Agbanyeghị, ndị enyi ọkọ akụkọ ihe mere eme na-enyo enyo na ọ bụ ya bụ ezigbo onye dere akwụkwọ a wee mebie mmekọrịta dị n'etiti ụmụnne nwanyị ahụ.
Anya Yellow Of The ...
Ebumnuche ahụ nwere ọnọdụ gbara gburugburu ndụ ụmụ nwoke na ụmụ nwanyị nkịtị na obodo ukwu dị ka Paris. Ebe ahụ, ndị inyom nke akụkọ ahụ gosipụtara (nke ọ bụla n'ụzọ nke ha) ọchịchọ ha na-emezughị n'etiti akụkọ jupụtara na ụgha. Mana ọbụghị ihe niile bụ anya mmiri na ndakpọ olileanya, enwekwara ohere maka ihunanya, ịchị ọchị na nrọ.
Les Yeux Jaunes des Agụ iyi Ọ bụ akwụkwọ ejiri ọtụtụ akara. Iji malite, anya na-acha odo odo nke ihe na-akpụ akpụ na-anọchite anya ụdị egwu dị iche iche: nke ọnwụ, nke ndụ, ịghọ onwe gị, ị ga-efu, ime ihe n'eziokwu ... Ihe odide niile na-atụ ụjọ site na ihe.
N'otu aka ahụ, Pancol gosipụtara ọdịiche nke àgwà nke ndị odide ya site na ụjọ. Ọmụmaatụ: Henriette Gorsz anaghị atụ egwu ihe ọ bụla, naanị na enweghị ego zuru oke. N'ihi ya, ọ na-eleda nwa ya nwanyị nke ọdụdụ, Josephine anya, onye nwere ọmịiko na mmesapụ aka. Kama nke ahụ, ada ya, bụ Iris, na-ezigara Henriette ihe oyiyi niile ọ masịrị ya: ike na ike.
Echiche nke ọrụ
Katherine Pancol kọwara n'ụzọ zuru ezu tinye akụkọ ya n'oge a gbara ajụjụ ọnụ na 2015 na Sophie Mason nke ọnụ ụzọ Australia Abụ ọkụ nke firebird. Mgbe ahụ, onye France na-ede akwụkwọ zoro aka na okwu Isak Dinesen nke gụrụ: "ọ na-amalite site na nghọta, ụdị ịkọwa egwuregwu ahụ… Mgbe ahụ ndị odide ahụ bịara, were ọnọdụ ahụ ma mee akụkọ".
Anya odo nke agụ iyi na-egosi ọtụtụ isiokwu na ụdị nke Katherine Pancol gụrụ kemgbe ọ bụ nwata. Ọfọn, N'ajụjụ ọnụ dị iche iche o kwupụtara na ọ masịrị ya ịgụ akụkọ ifo nke akụkọ ifo ndị Ijipt, Arabic na Scandinavia. N'otu aka ahụ, onye edemede France kwuru Karamụnna Karamazov (Dostoevsky), Le Pere Goriot (Balzac), na ọbụna David Copperfield.
A protagonist dabere na ezigbo agwa
Pancol kọwaara Mason na onye ọhụụ ya dabeere na onye dị adị. “Mụ na ya kwurịtara okwu, o nwere ụdị ejiji oge ochie, ọ na-adọrọ adọrọ ma ka m na-ege ntị, enwere m mmetụta ahụ m maara nke ọma! Josephine na-achọ ịmụ ”. Site n’okwu ndị a, onye ode akwụkwọ France ahụ kọwara onye nyocha ọ zutere n’akụkụ osimiri Normandy.
Ọzọkwa, Pancol kwuru na onye nyocha nke CNRS (National Center maka Scientific Research - French acronym) lebara anya n'otu ọmụmụ ihe ruo afọ 30: Ndị na-ere akwụkwọ akụkọ njem nke narị afọ nke XNUMX na France. Site n'oge ahụ gawa, onye edemede ahụ mepụtara ụwa gbara gburugburu Josephine, bụ onye, ​​n'adịghị ka onye mere eme n'ezie, na-enyocha ihe odide sitere na narị afọ nke XNUMX.
Ọmụmụ nke trilogy
Na mbu, ode akwukwo Gallic echeghi ituputa uzo ozo. Otú ọ dị, na ngwụcha akwụkwọ mbụ, Pancol gara n'ihu na-eche maka ndị odide ... "Gịnị mere ná ndụ ha? You wutere gị ma ọ bụ nwee obi ụtọ? N'ụzọ nke a, ụzọ abụọ ndị sochiri apụta pụtara na nke gosipụtara echiche dị iche iche nke ndị ọzọ na-egosipụta.
Banyere onye edemede, Katherine Pancol
Amuru ya na October 22, 1954, na Casablanca, Morocco; n’oge ahụ obodo a ka bụ akụkụ nke ọchịchị nchekwa France. Mgbe Katherine dị afọ ise, ya na ezinụlọ ya kwagara Paris. Mgbe e mesịrị, N’oge ntorobịa ya, ọ zụrụ azụ ịbụ onye nkuzi French na Latin.
Ndụ dum jikọtara na akwụkwọ ozi na akwụkwọ akụkọ
N'etiti 70s, Pancol gụsịrị doctorate ya na akwụkwọ ozi nke oge a na Mahadum nke Nanterre wee bido ọrụ nta akụkọ ya. Mgbe o bipụtara akwụkwọ akụkọ mbụ ya, Moi d'abord (M akpa, 1979), ọ kwagara New York. N'ebe ahụ, ọ debanyere aha na Mahadum Columbia iji mụọ ihe okike wee mepụta ọrụ na mahadum ahụ.
Bido n’afọ 1981, onye ode akwụkwọ French malitere ịrụ ọrụ dị ka onye ndezi novelas ye nte ewetn̄wed ke mme magazine Elle y Paris Match. Na mgbasa ozi ahụ e kwuru n'elu, ọ nwetara aha dị ukwuu n'ihi ụdị ajụjụ ọnụ ya. Mgbe ọ nọ na Big Apple, Katherine Pancol lụrụ ma nwee ụmụ abụọ (nwanyị na nwoke). Ọ gbara alụkwaghịm ugbu a wee biri na Paris.
Akwụkwọ Katherine Pancol
Eugene & moi (2020) bu akwukwo nke iri abuo na abuo nke Pancol binyere aka, onye nwere oru edemede nke ruru iri afo ano. Ọ bụ ọrụ malitere na 2006 ekele maka mwepụta nke Anya odo nke agụ iyi. Ọ bụghị ihe ijuanya na a sụgharịala ederede a n’ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ asụsụ iri na abụọ; n’etiti ndị ahụ: Chinese, Korean, Italian, Polish, Russian, Ukraine na Vietnamese.
Ewezuga ndị a kpọtụrụ aha Moi d'abord, Les Yeux Jaunes des Agụ iyi y Eugène & Moi, Ndepụta akwụkwọ Pancol dechara aha ndị a:
Onye ara mba ofesi (Ndị Barbare, 1981)
Acha uhie biko (Scarlett, ee kwere omume, 1985)
Menmụ nwoke obi tara mmiri anaghị aga n'okporo ámá (Les hommes cruels na circulent pas les rues, 1990)
Site n'èzí (Vu de l'extérieur, Seoul, 1993)
Ọmarịcha ọmarịcha foto a: Jackie Kennedy (1929-1994) ()N'otu aka, oyiyi reissue, 1994)
Otu agba egwu ọzọ (Enweela ihe ọhụrụ, 1998)
Etter Monter doro anya dans un amour ... (2001)
Nwoke no ebe di anya (Anaghị m anya, 2002)
Jide m: ndu ​​bu ochicho (Embrassez-moi, 2003)
Waltz ji nwayọ nke mbe (La Valse Lente des Tortues, 2008)
Ndị Park Central Park na-enwe mwute na Mọnde (Les écureuils de Central Park dị mwute, 2010)
Girlsmụ nwanyị [Ihe nkiri 1: Na-agba egwu n'ehihie] (2014)
Girlsmụ agbọghọ 2 [Ihe nkiri 2: Naanị otu nzọụkwụ site na obi ụtọ] (2014).
Girlsmụ agbọghọ 3 [Ihe nkiri 1: Bịa n'isi na ndụ] (2014)
Atutu onu (Osisi Trois, 2017)
Ndina Bed (2019)
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndị dị ugbu a » Genres » Novela » Anya odo nke agụ iyi
Paz Castelló. Ajụjụ ọnụ nke onye edemede nke Ọ dịghị onye n'ime anyị ga-enwe ọmịiko